Business | PRO-X Software Solution
ကနဦးလုပ်ငန်းသစ်အများစု မအောင်မြင်ကြတာ ဘာကြောင့်လဲ
ကနဦးလုပ်ငန်းသစ်အများစုဟာ မအောင်မြင်ကြပါဘူး။ အဲဒီလိုမအောင်မြင်အများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းခုနှစ်ခုနဲ့ အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေ တိုးလာအောင် သင်ခံယူကျင့်သုံးရမယ့်မဟာဗျူဟာတွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါမယ်။မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းကို ဘယ်သူမှမစဉ်းစားချင်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကို စလုပ်တဲ့ လူတွေဟာ ဒီအကြောင်းကို မစဉ်းစားချင်ကြပါဘူး။ အမေရ...
Visits : 3117
ယနေ့ခေတ်တွင် အရေးပါလာသည်မှာ မိမိကုန်ပစ္စည်း၊ မိမိအမှတ်တံဆိပ်ကို Customer များမှ စွဲစွဲမြဲမြဲနှစ်သက်ပြီးဝယ်ယူအားပေးရန် Customer Loyalty ရရှိရန် လိုအပ်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။ Customer Loyalty ရရှိရန်အတွက် Customer Care သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ် ပါသည်။ Customer Care ဟုဆိုလျင် မည်သည့်အရာကို Care လုပ်ရမည်နည်း။ Customer များ၏ Satisfaction ဆိုသည့် စိတ်ကျေနပ်မှုကို Ca...
Visits : 3226
Cloud Service ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ကိုင်ရန် အလီဘာဘာကုမ္ပဏီရုံးခွဲကို ရန်ကုန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် အလီဘာဘာ နိုင်ငံပေါင်းစုံလုပ်ငန်းအင်အားစု ကုမ္ပဏီအုပ်စုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာeGovernment ဝန်ဆောင်မှု၊ Smart City ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ Cloud Service ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှာ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ Whale Cloud နည်းပညာ ကုမ္ပဏီစီအီးအို (တောင်အာရှ) Mr.Louis Lu က ပြောပါတယ်။e Commerce ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ လူသိ...
Visits : 3723
Chips War ချစ်ပ်စစ်ပွဲများ
အမေရိကသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Semiconductor ရည်မှန်းချက်များကို လျစ်လျူရှုနိုင်သည့် အခြေအနေမရှိပါ။ ထိုရည်မှန်းချက်များကိုလည်း အလွယ်တကူမထိန်းချုပ်နိုင်သေးပါ။Donald Trump ကျေနပ်နှစ်သက်နေသည့် စီးပွား ရေးအငြင်းပွားမှုများသည် ရှေးဆန်သည့် ခံစားမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သွင်းကုန်အပေါ်ချမှတ်သည့် အခွန်အခများက အဓိကလက်နက်များဖြစ်သည်။ မော်တော်ကားများမှအစ၊ သံထည်ပစ္စည်းများအထ...
Visits : 4043
Visits : 5283
SWOT Analysis တန်ဖိုးရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချနည်း
Strength- စွမ်းအားရှိမှုWeakness- အားနည်းမှုများOpportunities- အခွင့်အရေးများThreads - ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်များSWOT Analysis ကို အဆင့်အမျိုးမျိုး၌ လုပ်နိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်မှ သီးခြားအကြောင်းအရာများပါဝင်သော ဌာန၊ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမှလည်းကောင်းလုပ်နိုင်သည်။&nbsp;လုပ်ငန်းတွင်းစွမ်းအားနှင့် အားနည်းမှုများ...လုပ်ငန်းအ...
Visits : 3725
25 - 30 of ( 68 ) records